गर्भाधानताका नखानुस् यी ९ चीज « Janata Samachar
गर्भाधानताका नखानुस् यी ९ चीज
प्रकाशित मिति :4September, 2018 7:58 pm
गर्भाधानको बेला महिलाले खानपानमा विशेष ख्याल राख्नु जरूरी छ । किनकी आमाको खानाबाट गर्भमा रहेको बच्चा प्रभावित हुन्छ । त्यसैले गर्भाधानको दौरान डाक्टरले खानपानमा संयमता राख्न सल्लाह दिन्छन् । केही बस्तु यस्ता हुन्छन् जसलाई गर्भाधानको दौरान खान मनाही गरिन्छ । किनकी यो आमासँगै गर्भमा रहेको बच्चाको स्वास्थ्यका लागि खतरनाक हुन सक्छ । आउनुस् हामी चर्चा गरौँ, गर्भाधानका दौरान कुन कुन खानेकुरा खानुहुन्न र किन ?
कैफिनः गर्भाधानका दौरान कैफिन प्रयोग गर्भमा रहेको शिशुका लागि खतरनाक हुनसक्छ । त्यसैले जति हुनसक्छ गर्भाधानका दौरान कैफिनको सेवनबाट बँच्नुपर्छ । यदि तपाईं कैफिनको प्रयोग गर्नु हुन्छ भने दिनभरमा केवल २०० मिलिग्राम गर्नुस् । गर्भाधानको दौरान चक्लेट पनि कम सेवन गर्नुस् किनकी चक्लेटमा पनि कैफिन हुन्छ, जसले महिला र शिशु दुवैको स्वास्थ्यलाई हानी गर्छ ।
अल्कोहलः सबैलाई थाहा छ, अल्कोहल स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ । गर्भाधानमा अल्कोहल सेवन महिलाका साथै गर्भमा रहेको शिशुका लागि अत्यन्त खतरनाक सावित हुनसक्छ । अल्कोहल अत्यधिक सेवनले गर्भपात हुने सम्भावना बढ्छ, साथै बच्चाको विकासमा पनि नकारात्मक असर पुग्छ ।
काँचो अण्डाः गर्भाधानका समय काँचो अण्डा न खाने सल्लाह दिइन्छ । किनकी अण्डामा साल्मोनेला ब्याक्टेरिया हुन्छ, जसका कारण फुड पोइजनिङ हुनसक्छ । गर्भाधानको दौरान महिलाको प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हुन्छ । त्यसैले ब्याक्टेरियाका कारण फुड पोइजनिङको शिकार हुन सक्छ । अनि त्यसले गर्भमा रहेको बच्चालाई सीधा प्रभावित गर्छ । गर्भवती महिलालाई यस्ले बान्ता, पखाला, पेट दुख्ने, टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने हुन सक्छ ।
साफ्ट बस्तुः गर्भाधानको दौरान सफ्ट बस्तु खानबाट बच्नुस् । किनकी अनपाश्चराइज्ड सफ्ट बस्तुमा लिस्टेरिया हुन्छ जस्ले गर्भमा रहेको शिशुलाई इन्फेक्सन हुने खतरा रहन्छ ।
फ्रोजेन फुडः पोषक तत्वको कुरा गर्दा फ्रोजेन फुड एकदम नराम्रो मानिन्छ । किनकी यसमा भिटामिन सी, भिटामिन बी १, बी २ र भिटामिन ए हुँदैन । फल र तरकारी ताजा खानु नै राम्रो हो । तर यो कुरा पनि महत्व राख्छ कि फ्रोजेन फुडलाई कसरी राखिएको छ । गर्भाधानमा यो फुड पोइजनिङका कारण पनि बन्न सक्छ ।
काँचो सी फुडः गर्भाधानका बेला काँचो र आधा पाकेको सी फुड खानाबाट सकभर बच्नुपर्छ । किनकी सी फुडमा ब्याक्टेरिया पाइन्छ । जसले गर्भमा रहेको शिशुलाई हानी गर्छ ।
मेवाः उसो त मेवा धेरै फाइदाजनक हुन्छ तर गर्भावस्थाका बेला मेवा सेवन खतरनाक साबित हुनसक्छ । मेवा काँचो होस् वा पाकेको, गर्भवती महिला यकिो सेवनबाट बच्नुपर्छ । किनकी गर्भावस्थामा मेवा खानाले मिसक्यारिज यानी गर्भपातको खतरा हुन्छ । मेवामा लेटेक्स हुन्छ । जसले युटेराइन कानटङक्सन शुरू गर्छ, र, गर्भावस्थाका समय भन्दा पहिले नै लेबरपेन शुरू हुन जान्छ र गर्भपात हुनसक्छ ।
सफ्ट ड्रिंक्सः गर्भावस्थामा सफ्ट ड्रिंक्स पिउनबाट बच्नुपर्छ । सफ्ट ड्रिंक्स पिउने महिलाको बच्चालाई कम उमेरमै पाचन र तौलसँग सम्बन्धित समस्या हुनसक्छ । त्यसैले विशेषज्ञले पनि गर्भावस्थामा सफ्ट ड्रिंक नपिउने सल्लाह दिन्छन् ।
प्रोसेस्ड जंक फुडः गर्भवती महिलालाई अन्य महिला भन्दा धेरै न्युट्रिएज्ट्स आवश्यम हुन्छ । तर प्रोसेस्ड जंक फुडमा न्यूट्रिएज्ट्सको मात्रा कम र क्यालोरी धेरै हुन्छ । साथै यसमा सुगर र फ्याट पनि अधिक हुन्छ । गर्भावस्थाको दौरान धेरै सुगरको सेवनले टाइप–२ डायबिटिज र मुटुको बिमारी हुने खतरा पनि अत्यधिक हुन्छ ।
सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुन आएन भने के सरकारले बन्द गरिदिन्छ ?
काठमाडौं । विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विद्येयक २०७५ मा
काठमाडौं । अज्ञात समूहले ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल कार्यालयको गेटमा शक्तिशाली बम बिस्फोट गर्दा घाइते भएकाकाे